पढेको मान्छेले कहिल्यै दुःख पाउँदैन : ढुंगेल | bethanchokkhabar.com
पढेको मान्छेले कहिल्यै दुःख पाउँदैन : ढुंगेल
शनिबार, साउन २५, २०७६ | २०:५३:३५ |
बाबुराम ढुंगेल, निर्देशक
हेक्जा एकेडेमी, बनेपा
मानिसले कर्म गर्न जान्छु पर्छ । कर्मकै आधारमा उसले जीवनमा पाउने फल निक्कै मिठो हुन्छ भने उ समाजमा स्थापित बन्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ । समाज पछिल्लो समय निक्कै व्यस्त बन्दै गएको छ । व्यस्त समाजमा मान्छेहरु बेरोजगार बन्ने क्रम समेत बढ्दै गएको छ । यो समयमा उनीहरुलाई सिप र शिक्षाको आवश्यक परेको हुन्छ । सोही शिक्षा,सिप र रोजगार दिने कार्यमा हेक्जा एकेडेमी बनेपा–६ निरन्तर लागेको छ । त्यसको जिम्मेवारी बाबुराम ढुंगेलले गरेका छन् ।
देशमा बड्दो बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण गर्दै कम्तीमा एस.ई.ई. तथा +२ मा सि, डि र ई. ग्रेड आएका तथा बिगतका बर्षहरुमा अध्ययन पश्चात बेरोजगारी रहनु भएका युवाहरूलाई हर्ष ,उल्लासका साथ छोटो अवधिमा स्वदेश तथा बिदेशका बहुप्रतिस्ठित होटलहरुमा शत प्रतिशत रोजगार बनाउदै , नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि डिप्लोमा होटल म्यानेजमेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको अनुभव ढुंगेलसँग छ । ल्याइ ६ महीनाको अध्यन पश्चात स्वदेश तथा बिदेशका स्तरीय होटलहरुमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकार बाट अनुमति प्राप्त गरि बनेपा – ६ बुडोलमा स्थापना गरिएको एक शैक्षिक संस्था हेक्जा एकेडेमी हो । यस संस्थाले काभ्रे लगाएतका विद्यार्थी भाइ, बहिनीहरु लाइ सान्त बाताबरणमा अत्याधुनिक कक्षाकोठामा न्युन शुल्कमा अध्ययन अध्यापनको ब्यबस्था गरिएको छ । साथै जापानीज, कोरियन तथा ट्युसन कक्षाहरु पनि ब्यवस्था रहेको छ । उनै ढुंगेलसँग गरिएको कुराकानीको अंशः
० दैनिकी कसरी बित्दैछ ? कत्तिको व्यस्तता छ दैनिक ?
– बिहानको समय संञ्जिवनि कलेज ,दिउँसो काठमाडौ युनिभर्सिटीमा मेडिकल साइन्समा र त्यसपछि तेक्वान्दो खेलको प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु । यसै बर्षको जेठ महिन बाट डिप्लोमा तहको होटल म्यानेजमेन्ट र कुलिनरी आर्टको कलेज संचालन गरिरहेको हुनाले त्यसैको ब्यबस्थापन तथा संचालनको लागी डाइरेक्टरको रूपमा काम गरिरहेकोले दैनिकी एकदमै ब्यस्त छ ।
० शिक्षा क्षेत्रमा कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
कोसिपारी जस्तो ठाउँमा जन्मेर शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो उत्प्रेरणा नपाए पनि ब्यतिगत रुपमै मलाई शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने चै लाग्थ्यो । भनिन्छ नि शिक्षा मानिसको तेस्रो आँखा हो । सुरु देखी नै पढाईमा अलि चासो र सक्रिय रहने मेरो स्वभावले निरन्तर रूपमा मलाई आज सम्म पनि र्डोयाइरहेको छ । शिक्षा हासिल गरे पछी जागीरे भइन्छ , ठुलो मान्छे बनिन्छ र समाजमा प्रतिष्ठित हुन् सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा म सधैं अडिग थिए ,त्यसैको फलस्वरूप आज म यो अवस्था सम्म आइपुगेको छु ।
० हेक्जा एकेडेमिको परिचय दिनुस् ?
देशमा बड्दो बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण गर्दै कम्तीमा एस.ई.ई. तथा +२ मा सि, डि र ई. ग्रेड आएका तथा बिगतका बर्षहरुमा अध्ययन पश्चात बेरोजगारी रहनु भएका युवाहरूलाई हर्ष ,उल्लासका साथ छोटो अवधिमा स्वदेश तथा बिदेशका बहुप्रतिस्ठित होटलहरुमा सत प्रतिशत रोजगार बनाउदै , नेपाल का विभिन्न जिल्लाहरुमा पनि डिप्लोमा होटल म्यनेजमेन्ट सन्चालनमा ल्याइ ६ महीनाको अध्यन पस्चात स्वदेश तथा बिदेशका स्तरीय होटलहरुमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकार बाट अनुमति प्राप्त गरि बनेपा – ६ बुडोलमा स्थापना गरिएको एक सैक्षिक संस्था हेक्जा एकेडेमी हो । यस संस्थाले काभ्रे लगाएतका विद्यार्थी भाइ, बहिनीहरु लाइ सान्त बाताबरणमा अत्याधुनिक कक्षाकोठामा न्युन शुल्कमा अध्ययन अध्यापनको ब्यबस्था गरिएको छ । साथै जापानीज, कोरियन, क्ष्भ्ीत्क् तथा ट्युसन कक्षाहरु पनि ब्यवस्था रहेको छ ।
० विद्यार्थीले के देखेर हेक्जा एकेडेमीलाई छान्ने ?
यो संस्था बेरोजगारी युवा बर्गमा लक्षित रहेर स्थापना भएको हो । छोटो अवधिको तालिममा आधारित शिक्षा प्राप्त गरि विभिन्न स्थानहरुमा जागीरको अवसर प्रदान गर्ने थलो भएकोले सैक्षिक र आर्थिक दुबै अवस्था बाट बिद्यार्थीहरु लाई उपलब्धि हासिल गराउने उदेश्य भएकोले यस संस्था विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ भएको छ ।
० विगतका दिनमा जागिरे जीवनलाई स्मरण गर्दा आफ्नै व्यवसायतिर लाग्दाको अनुभव सुनाउनुस न?
मध्यम बर्गिय परिवारमा जन्मेको हुनाले सानै उमेर देखी नै जागीरमा लाग्नु पर्ने बाध्यता थियोे । जागीर संग संगै पढाई लाई पनि निरन्तरता दिनु पर्ने भएकाले जागीर आफ्नो अध्यनको लागि एउटा आधार माग रहदै आएको थियो विभिन्न निजि बिधालयहरु हुदै कलेज सम्मको प्राध्यापन जिवन धेरै नै संघर्षपुण रहिआएको छ । घर परिवारको नजरमा जागीरे र पढाईको नजरमा विद्यार्थी जिवन बिताउदै आउदा धेरै अबिस्मरनिय क्षणहरु रहेका छन् ।
० यो स्थानसम्म आइपुग्दा धेरै चुनौतीहरु पार गर्नुभयो होला नि ?
अवश्य पनि धेरै समस्याहरु सङग लडाइँ गर्दै आएको छु । सङघर्स बिनाको सफलता त कुनै ब्यक्तिको पनि नरहला भन्ने लाग्छ । तेसैले मेरो जिबनमा पनि यस्ता धेरै चुनौतीपूर्ण दिनहरूलाई पार गार्दै अहासम्म आइपुगेको छु।
० हेक्जा एकेडेमीमा के के पढाई हुन्छ नि ? किन हेक्जा मै पाढ्नु पर्ने ?
हेक्जा एकेडेमी बिसुद्ध रूपमा होटेल म्यानेजमेन्ट र कुलिनरी आरटको पढाइ हुने संस्था हो । देशमा बड्दो वेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण गर्नाको लागि कम्तीमा एस.ई.ई. तथा +२ मा सि., डि. र ई ग्रेड आएका विद्यार्थीहरुलाई पनि अबसर प्रदान गर्ने हाम्रो उदेश्य हो । देश बिदेशका विभिन्न होटेलहरुमा जागिरको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने हेतुले हातले यो संस्था स्थापना गरेका छौं ।
० जीवन दुःख र सुखको सग्राम भन्छन् नि ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मेरो बिचारमा जिवन अनुभवहरुको सम्झौता हो । विभिन्न संस्था र ब्यक्तीहरु संग अनुभव साटासाट गर्दै सम्झौता गर्दै अधि बढ्नु नै जिवन हो । “संघर्ष नै जीवन हो” भन्ने मान्यता राख्ने म जागीरे जिवनको संघर्षलाई निरंतरता दिदै आफ्नो व्यावसाय तिर लागेको छु । व्यावसाय एउटा चुनौतीपूर्ण काम हो भन्ने लाग्छ तर चुनौती बाट हामी पछि हट्यौ भने सफल हुन सक्दैनौं । बास्तबमा आफ्नै व्यावसाय भए पछि सबै कामको जिम्मेवारी आफुनै भइन्छ जुन जागीरे जिवन भन्दा बिल्कुलै फरक छ ।
० तपाईको जीवनीबाट अरुले ज्ञान लिन सक्ने केहि कुरा हरु बताईदिनुस् न?
मेरो जिवन एकदमै संघर्षले भरिपुर्ण छ । आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागी हरेक सम्झौता गर्दै अघि बढनु पर्छ सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने लक्ष्य रहेको छ भने वेसक्याप्प बाट फर्केर चुचुरोमा सकिदैन त्यसैले हिम्मत नहारी आफ्नो यात्रामा निरन्तर लागी रहनु पर्छ एकदिन अवस्य सफल भइन्छ ।
० जीवन पढ्नकालागीकी पढाई जीवनका लागि के भन्नुहुन्छ ?
जीवनलाई व्यवहारिक र सफलताको बाटोमा अघि बढनका लागि पढाइ एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो । जीवनका लागी पढाइ हो र हुनुपर्छ पनि। तर कुनै समयमा लाग्थ्यो कि मेरो जिवन पढ्नकालागि मात्रै हो। अहिले यो निष्कर्षमा पुगे कि जीवनका लागी चै पढाइ महत्त्वपूर्ण रहेछ।
० यत्तिका धेरै विद्यालय तालिम केन्द्र हुदा हुदै हेक्जा एकेडेमीमा नै विद्यार्थी जान पर्ने कारण के हो ?
मैले मथिनै पनि भनिसकेको हु कि हेक्जा एकेडमी धेरै विद्यालय,तालिम केन्द्रहरु तथा कलेजहरुको भिडमा छुट्टै प्रकारको संस्था हो। जहाँ सबै ग्रेडका विद्यार्थीहरुलाइ सिपमुलक तालिम प्रदानको लगि भर्ना गरिन्छ । प्राक्षिक प्रमाणपत्रका सथसाथै विद्यार्थीले जीवन उपयोगी सिप हासिल गरि आफुलाई भबिस्यमा स्वरोजगार नागरिकको रूपमा स्थापित गर्दछ । बर्तमान समस्या अध्यक्ष र बेरोजगार रहेकोले यस संस्था मार्फत ति समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने भएकोले हेक्जा एकेडेमी नै विद्यार्थीको एक मात्र विकल्प हो ।
० जीवनको एक आदर्श व्यक्ति सम्झनुपर्यो भने कसलाई सम्झनुहुन्छ, किन ?
मेरो जीवनको एक आदर्श व्यत्ती बुबा बिष्णु प्रसाद ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। उहाँले छोरा मान्छेले हरेक चोट सहनुपर्छ, सङ्घर्ष गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मार्गदर्शनले मेरो जीवनमा धेरै प्रभाव पारेको छ। त्यसै मार्गदर्शनका आधारमा मेरा सफलताहरुले साथ पाएका छन् ।
० वैवाहिक जिबन र एक्लो जीवनमा के फरक छ ?
एक्लो जीवन र वैवाहिक जीवनमा केहि भिन्नताहरु त हुन्छन नै। पारिवारिक व्यवहारिक दायित्वहरुमा बढी जिम्मेवारी थपिने लगाएत हुन्छन भने आफ्नो उदेश्यमा जीवनसाथीको सहयोगले हौसला र प्रेरणा थपिदिन्छ। बाल्यकाल र बिबाह मानिसको जिबनको एउटा चक्र हो ।
० जीवनको एक अविस्मरणीय क्षण भन्दा के लाई सम्झनुहुन्छ ?
मेरो जीवनको अविस्मरणीय क्षणको रूपमा मैले पढाईलाई मास्टर्स डिग्रीको उपाधि हासिल गरेको क्षण हो । यस उपाधिसम्म आइपुग्न धेरै संघर्षपुर्ण यात्राहरु बाट सफल भएकोले यस क्षण धेरै नै महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय क्षण बन्न पुगेको छ। जीवनको आदर्शवान व्यक्तित्व मेरो बुबालाइ मैले सदाको लागि गुमाउनु परेको क्षण सयौं जुनिसम्म पनि अविस्मरणीय रहने छ र यस पछिका दिनहरुमा यो मेरो लक्ष्यलाई सफल बनाउन सहयोग र हौसला प्रदान गर्न प्रकाशित यस्ता लेखहरु प्रकाशित भएको क्षन पनि अबिस्मरनिय रहनेछ ।
० अन्तमा के भन्न चाहानुहुन्छ ?
अन्तमाः मेरो व्यक्तिगत र यस हेक्जा एकेडेमी प्रा.लि. को बारेमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुहुने भएकोमा आभर व्यक्त गर्न चहान्छु । साथै व्यवहारिक र सिपमुलक शिक्षा प्राप्तिको यो अभियानलाइ साथ दिनुहुन सम्पुर्ण शुभचिन्तक,अभिभावक ,साथिभाइ र विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाइ हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
एस.ई.ई. उत्तिर्ण भाईबहिनीहरुको लागि कलेज छनोट गर्ने यो एकदमै महत्वपूर्ण समय भएकोले आफ्नो इच्छा रहेको विषय र कलेज छनोट गरि उज्ज्वल भबिस्य बनाउने तर्फ लाग्न पनि अनुरोध गर्दछु ।